ANTOKA HO AMIN’NY HO AVIN’NY ANKIZY NY FIDIRANY AN-TSEKOLY.	Filed under: Uncategorized — zouboon @ 7:15 Mahatratra 96% ny ezaka efa tratra ho an’ny fampidirana an-tsekoly ny ankizy manerana ny nosy. Fantatra io salan’isa io tao aorian’ny fikarohana nataon’ny UNICEF.
Mahafinaritra ny mahita ilay tarehimarika 96%🙂 fa ny tiako ho fantatra hoe atramin’ny taona faha firy no voakasik’io tarehimarika io?
Commentaire par Tahina — juillet 22, 2009 @ 8:13 Répondre	raha ny fiheverako azy aloha dia hatramin’ny faha 12 na 13 taona eo satria eo no voafetra hoe zaza. sa aona hoy ianao? tsy préci mantsy ny doné ananak
Commentaire par zouboon — juillet 28, 2009 @ 9:44 Répondre	Possible, mety hoe any amin’ny classes primaires🙂
Commentaire par Tahina — juillet 29, 2009 @ 7:06 Répondre	RSS feed for comments on this post.